Jacques Dutronc: သူမွေးဖွားစဉ်ကFrançoise Hardy နှင့်သူမနေထိုင်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းပြချက်မှာ - teles relay
Jacques Dutronc - သူမွေးသောအချိန်တွင်Françoise Hardy နှင့်သူမနေထိုင်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်
ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ“ Little” နိုက်ကတ်မှချာလီဘတ်တီသည်သေဆုံးသွားသည်။
Rachel Legrain-Trapani: လွန်ခဲ့သော ၁၁ နှစ်ကသူမအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့သည်။
မင်းသမီး Eugenie သည်ဖာဂူအားထိထိရောက်ရောက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည် -
အကြားပြည်ထောင်စု၏ Jacques Dutronc et ဖရန်ကွိုက်စ Hardy ၁၉၇၃ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်သူတို့၏သားကိုမွေးဖွားခဲ့သည် သောမတ်စ်။ သို့သော်ကလေးမွေးဖွားလာသောအခါအဆိုတော်သည်သူ့မိသားစုနှင့်အတူမနေလိုပါ။ မင်းအမှားsomewhat အတန်ငယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးကင်းစသူ၏ပြissueနာသစ်၏ကော်လံတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ပဲရစ်ပွဲစဉ်. "ကျုပ်ရဲ့ Cheetah Sumo ကိုဂရုစိုက်ရတယ်"သူက သားရဲသည်သူ့ဘဝတွင်ကြီးမားသောနေရာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ "သူကငါနဲ့အတူနေတယ်။ သူ့ကို Mickey လိုအမြီးအပေါက်လေးတစ်ခုနဲ့ကလေးငယ်လေးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူအိပ်ရာပေါ်မှာ pissed ။ ညမှာသူအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်၊ အိပ်ချလိုက်တယ်၊ ကျယ်လောင်စွာဟောက်လိုက်တယ်။ ငါနဲ့သူကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး”, သူကရှင်းပြသည်။
ထိုအခါ အဆိုပါ cheetah 1974 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်. "ဝမ်းနည်းခြင်း၏"ကပြောပါတယ် Jacques Dutroncသူခရီးစဉ်အပေါ်အခါ။ ထို့နောက်သူသည်မိမိသားကိုအပြည့်အဝဆက်ကပ်အပ်နှံနိုင်ခဲ့သည်။ "သူကပိုပြီးသန်မာတယ်ဆိုတာသက်သေပြတာပဲ။ တနည်းပြောရရင်သောမတ်စ်ကကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေတယ်။ သူကောင်းကောင်းလုပ်တယ် " ယနေ့တွင် ဖခင်နှင့်သားဂဟေဆော်နေကြသည်.
Jacques Dutronc နှင့်Françoise Hardy - အထူးဆက်ဆံရေး
အဘယ်သူသည် 2014 ကနေ 2017 မှသုံးဖွဲ့စည်းခဲ့သည် ဟောငျး scoundrels avec Eddy Mitchell က et ဂျော်နီ Hallyday တစ် ဦး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ပြားချပ်ချပ်ဘဝမသိရပါဘူး။ တွေ့ဆုံပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ဖရန်ကွိုက်စ Hardy - ထိုအခါသူတို့သားမွေးဖွား - သူကသူ့လက်ကိုတောင်းခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကာလအတွင်းသူအောင်ပွဲများကိုချည်နှောင်ခဲ့သည်နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၈၈ မှာတော့သူမအမျိုးသားနဲ့တွေ့ပြီးဒီဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သူမကဒီနေ့ဝန်ခံရင်တောင်သားရဲ့ဖခင် မိမိအသက်တာ၏တစ် ဦး တည်းသောလူကိုဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ 1997 မှ Jacques Dutronc Sylvie Duval ၏လက်၌ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကခွဲခွာခဲ့သော်လည်း Jacques Dutronc နှင့်Françoise Hardy တို့သည်မကွာရှင်းသေးပါ.
ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ“ Little” ချာလီဘက်တီသည်နိုက်ကတ်မှသေဆုံးသွားသည်
Rachel Legrain-Trapani: လွန်ခဲ့သော ၁၁ နှစ်ကသူမအတိတ်ကိုရင်ဖွင့်ခဲ့သည် ...
မင်းသမီး Eugenie သည်ဖာဂူအားထိထိရောက်ရောက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည် - အမည်ပြောင်အပါအဝင်
အမေဇုံ Go ကုန်စုံ - ငွေရတတ်သောကမ်းလှမ်းမှုရှိသောငွေကိုင်ကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်။ သတင်းစာ